Maalinta: Noofambar 22, 2019
Nidaamka Tareenka ee ay ku guuleysteen Shirkadaha Turkiga ee Suuqa Adduunka; Turkey, inkastoo ay hoos u dhac iyo muddo halis dheeraad ah suuqa caalamiga ah kaalinta labaad ee adduunka shirkadaha 44 in industry ee dhismaha caalamiga ah. 2018 gudaha caalamiga ah [More ...]
Saldhigga Subway ee ITU Ayazağa, eeyga waxaa loo qaaday ambalaas; İTU - Saldhigga metrooga ee Ayazağa oo jiifa aagga eey eeyaha ayaa soo jiidatay eeygii caajiska ahaa wuxuu soo jiitay dareenka shaqaalaha metrooga. Caafimaadka shaqaalaha goobta jooga [More ...]
Garoomadayada, hawlgallada degdegga ah ee lagu fulinayo isuduwidda waaxyada Badbaadada Duulista iyo Dabka (RFF) ayaan u dhigmin xaqiiqda. 32 wuxuu si guul leh u fuliyaa samata bixinta, gargaarka degdegga ah iyo howlaha shilalka dhaca ee ka dhaca garoonka diyaaradaha. [More ...]
Kuraasyada Un Feed waa in lagu daraa basaska ”, Gacmaha aan hayn bakteeriyada waa la hagaajin karaa”, device aaladda EDS waa in lagu dhejiyaa basaska hortiisa ciqaabtana otomaatig ah waa in lagu soo saaraa xadgudubyada ”… Talooyinkaan ayaa ka yimid adiga. Goobta cusub ee wax soo saarka IETT (inovasyon.iett.gov.tr) waxay soo aruurisay talo soo jeedin xiiso leh oo ka timid dadka deggan magaalada Istanbul. [More ...]
Caasimaddu waxay martigelin doontaa "Ankara Off-Season'19 Robot Tournament". Tartanka Robot, kaas oo qabsoomi doona inta u dhaxaysa bisha November ee 23-25 November oo ay qaban doonaan iskuulada Tevfik Fikret ee gaarka loo leeyahay iyadoo la kaashanayo Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara iyo hay’ado iyo ururo badan, [More ...]
'Passin' Casriga ah ee Casriga ah ee loo yaqaan 'Pass Pass Top' waxaa loo furay Adeegsiga Muwaadiniinta; Gawaarida taraafikada ka sokow, dadka lugeynaya waxay si sahlan ugu gudbi karaan Magaalada Kocaeli Metropolitan Dowlada hoose, magaaladu waxay heshay isgoysyo lug iyo casri ah oo lugeynaya. [More ...]